Kuboshwe umsolwa ecaleni lokugqekeza | News24
Kuboshwe umsolwa ecaleni lokugqekeza
AMAPHOYISA ase-Hillcrest abophe umsolwa oneminyaka eyi-27, ngomhla ka-12 kuNtulikazi (July), KwaNyuswa Resrve ngecala lokugqekeza umuzi.
Okhulumela amaphoyisa ase-Hillcrest ngaphansi komnyango wezokuXhumana, uConstable Ndumiso Manqele, uthe ngoLwesine mhla ka-9 kuNtulikazi ngezikhathi zawo-9.30 ekuseni, abasolwa ababili bagqekeza umuzi ose-Hillcrest. “Laba solwa bangena bakhomba umnikazi womuzi ngommese, bathatha ubucwebe, bathatha okhiye be-safe, bathatha isibhamu sakhe nokunye,”kusho yena.
Ummangali wavula icala lokugqekezelwa emaphoyiseni ase-Hillcrest, lapho abezocwaningo baphenya icala kabanzi, balandelwa imininingwano abayithola ngabasolwa. “Amaphoyisa akwazi ukuthola umsolwa oyedwa owatholakala nokunye okwaku ntshontshiwe emzini kammangali. Umsolwa wavela kafushane enkantolo kaMantshi e-Pinetown ngomhla ka-15 kuNtulikazi. Umphathi steshi wase-Hillcrest uncome umsebenzi omuhle owenziwe amaphoyisa,” kusho uManqele